ProCure ပရိုတွန်ကုထုံး - တိကျစွာပစ်မှတ်ထားခြင်း။ နည်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
As an essential cancer facility, ProCure remains open and accessible to patients in need of treatment. Additionally, to help stop the spread of the COVID-19 virus and keep patients safe, we are now offering virtual consultations and follow-up visits to protect patients and their family members. Patients can haveavirtual face-to-face telemedicine appointment withaphysician at ProCure from the comfort and safety of their home through either phone, tablet or video-chat enabled computer or laptops. Please contact us at 732-357-2600 to learn more. Nothing is more important to us than your health and safety during these unprecedented times.
ProCure တွင်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ကင်ဆာရောဂါကို ဦး တည်ပါ
နယူးဂျာစီပြည်နယ်၏ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော Pencil Beam Scanning စင်တာ
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ လူနာ ၅၀၀၀ ကျော်ကိုကုသခဲ့သည်
ဖြတ် - EDGE ကုသမှု, သက်သေပြရလဒ်များ
ထိရောက်သော၊ ထိန်းချုပ်ထားသောနှင့်တိကျသော၊ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာကုသသောနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ pinpoint တိကျမှုနှင့်အတူပရိုတွန်ကုထုံးသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအကျိတ်အတွင်းသို့တိုက်ရိုက်ပို့လွှတ်ပြီးရပ်တန့်သည်။ ကျန်းမာသောတစ်သျှူးများနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချပေးပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုကုသရာတွင်ထိရောက်ပါသည်။ ၎င်း၏လေဆာကဲ့သို့တိကျမှုသည်၎င်းကိုမမှန်ပုံသဏ္shapedာန်နှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိသောမမှန်ပုံမကျိတ်များ၊ ကလေးကင်ဆာနှင့်အကျိတ်များအပါအဝင်အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ရပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်စေသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်စက်ရုံရှိသတင်းအချက်အလက်ကဏ္sessionအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏နေရာကိုယနေ့ထားရန်စင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့သည်ကင်ဆာရောဂါကုသမှုတွင်အကောင်းဆုံးကိုသာမကသင်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုလည်းပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမားတော်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအတွေ့အကြုံများစွာဖြင့် Harvard Medical School, MD Anderson နှင့် Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်များအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအဖွဲ့အစည်းများတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး ဆောင်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ကင်ဆာပညာရပ်ဆိုင်ရာသူနာပြုများနှင့်အထောက်အကူပြု ၀ န်ထမ်းများအထိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တစ်ခုလုံးသည်သင်၏ကုသမှုကိုတိုးတက်စေသောနွေးထွေး။ ကြိုဆိုသည့်အသိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးချွန်မှုကြောင့်လူသိများသော ProCure သည်အရှုပ်ထွေးဆုံးကင်ဆာရောဂါကုသမှုတွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုပေးသည်။ သုံးပွင့်ဆိုင်areaရိယာတွင်အရှည်ကြာဆုံးတည်ထောင်ထားသောစင်တာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လူနာစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူကြသည်။
ပုံမှန် X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားကိုအသည်း၏အခြားဘက်သို့ကူးစက်သည့် အချိန်မှစ၍ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သောအခါပရိုတွန်ကုထုံးသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျန်းမာရေးပြthroughနာများမှမထွက်ဘဲဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုတိုက်ရိုက်သွယ်တန်းစေသည်။
လူနာများအားပရိုတွန်ကုထုံးကိုပို့ဆောင်ရန်အတွက် ProCure သည်နိုင်ငံ၏ ဦး ဆောင်ဆေးရုံများနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရပ်များနှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ငါတို့ လက်တွေ့ဆက်နွယ် Memorial Sloan Kettering၊ Sinai Mount, Montefiore, NYU နှင့် Northwell Health တို့ပါ ၀ င်သည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးအကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရှိနေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါပုံစံကိုဖြည့်စွက်။ သင်၏မေးခွန်းများဖြေဆိုရန်တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုတတိယပါတီနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။